ထမင်းအိုး: မုန့်ညှင်းချဉ်သုပ်(သို့) ဗမာမုန့်ညှင်းချဉ်
မုန့်ညှင်းချဉ်သုပ်လေး စားသွားပါအုံးလား (ဂျင်း၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ နံနံပင်၊ ဆီစိမ်း၊ အချိုမှုန့်ထည့်ပြီးသုပ်စားပါတယ်ရှင်)
နယ်ပြီး ဗူးနဲ့ ဒီလိုထည့်ထားတယ်။
မုန့်ညှင်းစိမ်းကို ရေဆေးပြီး အနေတော်အပိုင်းလှီးဖြတ်ပါ။ ပြီးရင် မုန့်ညှင်းကိုရေစစ်ထားပါ။ နယ်မယ့် ဇလုံထဲသို့ ထမင်း လက်တဆုပ်ထည့်၊ ဆားထည့်(ပုံမှန်ထက် ၂ ဆထည့်) ပြီးအရင်နယ်ပါ။ ဆားနည်းလွန်းရင်လဲ စားလို့မကောင်းပါ။ ထမင်းနဲ့ဆားရောသွားအောင်နယ်ပေးပါ။ ပြီးရင် မုန့်ညှင်းကို
ထည့်ပြီးနယ်ပေးပါ။ တချို့ကတော့ ဂျင်းစိမ်းလေးကိုပါးပါးလှီးပြီးထည့်တည်တတ်ကြပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ သုပ်စားတဲ့အခါမှသာ ထည့်တာကိုပိုကြိုက်လို့ပါ။ အယ်.........နယ်ပြီးရင်တော့ ဗူးသန့်သန့်လေးထဲမှာထည့်ပါ။ ရာသီဥတုပူရင်တော့ ၂ ရက်ဆိုရပါပြီ။ ရာသီဥတုအေးရင်တော့ ၃ ရက်၊ ၄ ရက်လောက်ထားပေးပါ။ အချဉ်ရရင်တော့ ပိုပြီးမချဉ်သွားစေရန် ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ထားပေးပါ။ စားချင်တဲ့အခါထုတ်စားနိုင်ပါပြီ။ သုပ်စား၊ အသားနဲ့ကြော်စားလို့ရပါတယ်။ ကဲ မုန့်ညှင်းချဉ်လုပ်နည်း မလွယ်ဘူးလားလေ။
(အထူးသတိ။ ။ တချို့သူတွေရဲ့လက်တွေက လက်ပူတယ်၊ လက်အေးတယ် ဆိုပြီးရှိတတ်ကြတယ်လို့အိမ်ကအမေတို့က ပြောတယ်။ လက်ပူတဲ့သူများဒီတိုင်းတည်ရင် အချဉ်တွေက ပုပ်သွားတတ်ပါတယ်။ လက်ပူတဲ့သူများဆိုရင်တော့ အချဉ်တည်ကြရင် လက်အိတ်လေးစွတ်ပြီးတည်ပေးပါ။ ကျွန်မရဲ့လက်ကလည်း လက်ပူလား၊ လက်အေးလားလို့ မသိလို့ ပထမဆုံးအကြိမ်တည်တုံးက လက်အိတ်စွတ်ပြီးတည်ပါတယ်။ နောက်တကြိမ်မှာတော့လက်အိတ်မစွတ်ဘဲ တည်ကြည့်ပါတယ်။ အဟီး ကံကောင်းတယ်ပြောရမယ် နှစ်ခါစလုံး အချဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မလို အချဉ်ကြိုက်သူများ လုပ်စားနိုင်ပါစေ။)
Posted by မိုးကောင်းသူ at 2:20 PM
Labels: အချဉ်တည်နည်းများ, အချဉ်ဟင်းများ, အသုပ်လေးများ
အကျိုးနဲ ... ဒီလဲရောက်တာဘဲလား အရီးကွန်။ ကျွန်တော့်မှာ တိမ်မြှုတ်ထားတဲ့ ဘလော့စပေါ့က လိပ်စာတစ်ခုရှိတယ် ရှာနိုင်မလား။ ခွိခွိ။
အရင်ကဟာတွေ ကုန်အောင် ချက်စားလိုက်ဦးမယ် အဲလေ ဖတ်လိုက်ဦးမယ်နော့
မမလဲအဲလိုမုန့်ညင်းချဉ်တည်ထားတာလေ..မေမေတို့လာတုန်းက..အခုကုန်သွားလို့ ထပ်လုပ်ထားသေးတယ်. အရမ်းကြိုက် :D
ဒီနေ့ဘာဟင်းလဲ လာစားမလို့ နေ့တိုင်းချက်နိုင်တာ တော်လိုက်တာ အချဉ်တည်နည်းပေးလို့ ကျေးဇူး။
တည်စားချင်တယ်။ အရမ်းကြာကြာထားရင် အရမ်းချဉ်သွားလားဟင်?
ခုမှပဲ စားဖိုမှူးနဲ့ တွေ့တော့တယ်...း)
အားလုံး ချက်စားသွား.......အဲလေ အားလုံးဖတ်ပါရှင်။
အချဉ်ရရင် ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ထားလိုက်ပါ။ ဒါဆိုပိုပြီး မချဉ်တော့ပါဘူး။